အင်တာနက်ပေါ်က website တွေက ဘာလို့ လေးတာလဲ
အင်တာနက်ပေါ်က သတင်းဆိုက်တွေ တော်တော်များများက ဝါသနာပါလို့ blog လုပ်ရင်းနဲ့ သတင်းတွေ တင်ဖြစ်တာတို့၊ Download လင့်တွေပေးပြီးတော့ အဲဒီလင့်ကနေတစ်ဆင့် ငွေရှာဖို့အတွက် blog တွေလုပ်ပြီး သတင်းတွေတင်၊ နည်းပညာ အကြောင်းအရာတွေတင်၊ software တွေ download ပေး၊ စသဖြင့်ပေါ့။
အဲဒီတော့ သူတို့လည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာရင်း၊ ဖွေရင်း၊ လေ့လာရင်းနဲ့ တွေ့တဲ့ code တွေစမ်းကြည့်၊ ထည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့ blog တွေက လေးလာကြတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် blog ကို အရမ်း တန်ဆာဆင်တာ၊ ပုံတွေများတာ၊ မလိုတဲ့ code တွေပါနေတာ စတာတွေကြောင့် website တွေ လေးတာမျိုးပေါ့။ Blog ပိုင်ရှင်တွေအတွက် blog မလေးအောင် လုပ်ပုံလုပ်နည်း ကိုတော့ ပြောပြထားဖူးပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ website ကြည့်မယ့်၊ သတင်းဖတ်မယ့် user တွေဘက်က လုပ်ရမှာပါ။
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒါက လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောလိုက်ရင်တော့ “ဪ … ဒါလေးများ” ဆိုပြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဒါလေးများကပဲ တော်တော်လေး အသုံးဝင်နေလို့ တကူးတက post ရေးလိုက်ရတာပါ။
ဪ … ဒါလေးများ
Addon ကတော့ web developer toolbar မဟုတ်ပါဘူး။ သူက အနည်းဆုံး click နှစ်ချက်တော့ နှိပ်ရပါတယ်။ အခုတင်မယ့်ဟာကတော့ တစ်ချက်တည်းနဲ့ အပိတ်အဖွင့်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Google chrome သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင် website တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့် ပိတ်ထားလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Chrome browser အတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်း
ကိုယ်သတင်းဖတ်နေကျ blog ကိုသွားပြီးတော့ အဲဒီ icon လေးကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ icon လေး အနီရောင်ပြောင်းသွားရင် အဲဒီ website ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။ chrome သမားတွေအတွက်တော့ website တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကွက်ပြီး ပိတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
Firefox သုံးတဲ့သူတွေအတွက် လုပ်ပုံလုပ်နည်း
Firefox browser အတွက်ဆိုရင် ဒီလင့် (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/toggle-js/) ကို သွားပြီး download now ကိုနှိပ်ပါ။ browser ဘယ်ဘက် အပေါ်နားမှာ Allow ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးပေါ်လာရင် နှိပ်ပါ။ နောက်ထပ် box တစ်ခုပေါ်လာရင် install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် addon တင်လို့ပြီးပါပြီ။ Addon တော်တော်များများက browser restart ချရပေမယ့် ဒီတစ်ခုကတော့ restart ချဖို့ မလိုတဲ့ အစားထဲကပါ။
သူ့ကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင် browser ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်နားမှာ အစိမ်းရောင် လက်မထောင်နေတဲ့ ပုံလေး တွေ့ရပါမယ်။ နှိပ်လိုက်ရင် နီသွားပါမယ်။ နီသွားရင် js ကို ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်ပါ။
သူကတော့ website တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့် ပိတ်တာဖွင့်တာ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ပိတ်ရင် အားလုံးအတွက် ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဖွင့်ရင် အားလုံးအတွက် ဖွင့်ပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ၊ အဆင်မပြေရင် comment, အဆင်ပြေရင် like & share ပေါ့… 🙂
← Gmail password ေပါက္ၾကားတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဘာဆက္လုပ္သင့္လဲ Blog မွာ blog မွာ facebook like and share button ထည့္နည္း →
25 thoughts on “အင်တာနက် speed (၃၀၀%) ဆ မြန်အောင်လုပ်နည်း”
sithu mg says:
good __very very good.
saw ye zan tun says:
thank you.a little is good will program.
မဂၤလာပါအစ္ကုိေရကၽႊန္ေတာ္ phpmyadmin နဲ wampsaver အသုံးျပဳနည္းေလးအေျခခံသိခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ ေနာက္ျပီး javascipt ပညာေလးလဲအခ်ိန္ရရင္ပုိစ္တင္ျပီးသင္ပးပါးလားးးး ကၽႊန္ေတာ္အစ္ကုိယ္ HTML CSS ၀က္ဘ္လုပ္နည္းေလးေတြၾကည့္ျပီးေတာ္ေတာ္သိေနပါျပီ ဒါေပမယ့္ အေပၚကေျပာခဲတဲ့သုံးခုက်ေတာ့ဘာမွန္းကုိမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္ javascipt ကလည္းေတာ္ေတာ္ခက္တယ္ဗ်ာနားကုိမလည္ဘူးးးးးးးးး သူကwindowေဘာက္ေတြေဖာ္တာမွာသုံးတာလားဘာလားးးဘာမွရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိဘူးဗ် အစ္ကုိရဲ သင္ခန္းစာေတြကနားလည္လြယ္လုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္ရင္အေျခခံေလးေပါ့ဗ်ာ ဘာေတြအတြက္အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာသိခ်င္လုိ႕ပါ ေဘာ္ဒါေတြထဲကေတာ့ေျပာတယ္ phpmyadmin က မန္ဘာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာသုံးတာတဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာေမးေတာ့လဘာမွမသိရဘူးးးးသူတုိေတြကမေျပာခ်င္တာေနမွာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္အေျခခံသင္ခန္းစာေလးေတြအခ်ိန္ရရင္တင္ေပးပါေနာ္
က်န္တာကုိေတာ့ https://www.myanmarwebdesigner.com/blog/category/cms-tutorials မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
Thanks u very much……..
Minn Paing says:
than chaung says:
Yi Yi Tun says:
It doesn’t work incognito mode on chrome!
Yes, you’ll need to give permission so that it could work in Incognito mode.
Arkar Kyaw Soe says:
Thanks you so much my dsner
San Yu says:
Thank you for sharing.Really useful to me.